Sport Archives - Page 196 of 197 - Yangon Media Group
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နှင့်ပွဲက ပြိုင်ဘက် အသင်းများကို သတိပေးလိုက်ခြင်းဟု အမ်ဘာပီ ကြုံးဝါး
ပီအက်စ်ဂျီအသင်းတိုက်စစ်မှူး အမ်ဘာပီက ချန်ပီယံလိဂ်တွင် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကို ဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းမှာ မည်သည့် ထိပ်သီးအသင်းကိုမဆို အနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိသည်ကို သတိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ ပီအက်စ်ဂျီသည် အိမ်ကွင်းတွင် ကစားခဲ့သော အဆိုပါပွဲတွင် ကာဗာနီ၊ နေမာ၊ အဲလ်ဗက်စ်တို့၏ သွင်းဂိုးများဖြင့် သုံးဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး...
ရီးရဲလ်တိုက်စစ်မှူးစီရော်နယ်ဒိုက ကိန်းဂဏန်းများက မိမိ၏ခြေစွမ်းကိုထုတ်ဖော်ပြသနေကြခြင်း ဖြစ်သော်လည်း မိမိအနေဖြင့်ဝေဖန်မှုများကို ပွဲတိုင်းတွင်သက်သေပြနေရဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ စီရော်နယ်ဒိုသည် ဒေါ့မွန်ကွင်းတွင် ပထမဆုံး အကြိမ်အနိုင်ရခဲ့သောရီးရဲလ်အတွက် နှစ်ဂိုးသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့သော်လည်း လာလီဂါတွင် ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ် မှပြန်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ ခြင်းမရှိသည်မှာ နှစ်ပွဲဆက်တိုက်ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ဝေဖန်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်သည်။ စီရော်နယ်ဒိုက...
အဲလ်ကာဆာ၏ အနာဂတ်ကို နည်းပြ ဗဲလ်ဗာဒီ အာမခံချက် မပေးနိုင်
ဘာစီလိုနာနည်းပြဗဲလ်ဗာဒီကအသင်းတွင် ပွဲထွက်ကစားခွင့်ပျောက်ဆုံးနေသော တိုက်စစ်မှူး အဲလ်ကာဆာ၏အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်၍ အာမခံ ချက်မပေးနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ အဲလ်ကာဆာသည် အလာဗက်စ်နှင့်ပွဲတွင် လူစားဝင်ကစားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပွဲကစားခွင့် ပျောက်ဆုံးနေသူဖြစ်ပြီး အက်စ်ပန်ညို၊ ဂျီရိုနာ တို့နှင့်ပွဲများတွင်လည်း ပွဲကစားခွင့်မရပဲ အရန်အဖြစ်သာရှိခဲ့ပြီးနောက် စပို့တင်းနှင့် ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ် ၌ လူစာရင်းမှချန်လှပ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။...
အင်္ဂလန်အသင်း၏ ဂျာစီပေါ်တွင် ပေါ်ပီပန်းပွင့် ပုံ(ဘိန်းပွင့်) အား တပ်ဆင် ကစားခွင့်ရရှိ
လန်ဒန် ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲချုပ် တာဝန်ရှိသူများသည် ဘောလုံးရပ်ဝန်းအတွင်း၌ မကြာခဏ ဆိုသလို အငြင်းပွားနေရသည့် အင်္ဂလန်အသင်း၏ လက်ရွေးစင်ဂျာစီပေါ်တွင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ကွယ်လွန်ခဲ့သူများအား ရည်ရွယ်ဂုဏ်ပြုဖော်ပြသည့် ပေါ်ပီပန်းပွင့်(ဘိန်းပွင့်)အား တရားဝင်ဝတ်ဆင် ကစားခွင့်ပြုခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါကိစ္စအတွက် နှစ်စဉ်တိုင်းနီးပါး ဖီဖာနှင့် အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အကြား...
အသင်းတစ်သင်းကို ကိုင်တွယ်တော့မည်ဟု အလွန်ဆိုကြေညာ
ကစားသမားဘဝမှအနားယူသွားခဲ့ပြီဖြစ်သော စပိန်ကွင်းလယ် ကစားသမားဇာဘီအလွန်ဆိုသည် မကြာမီအသင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းကို တာဝန်ယူတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ကြေညာလိုက်သည်။ လီဗာပူးနှင့် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကစားသမားဟောင်း အလွန်ဆိုသည် ပြီးခဲ့သည့်ရာသီ အကုန်က ကစားသမားဘဝမှအနားယူခဲ့သူဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ဘောလုံး လောကသို့ ပြန်လည်အခြေချမှုအဖြစ် အသင်းတစ်သင်းအားကိုင်တွယ် တော့မည်ဖြစ်သည်။ ...
ချဲလ်ဆီးအသင်းနည်းပြကွန်တီက အနာဂတ်တစ်ချိန်ချိန်တွင် အီတလီအသင်းတစ်သင်းကို ကိုင်တွယ်လိုကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။ ကွန်တီသည် အီတလီကလပ်များဖြစ်သော အဇက်ဇို၊ အတ္တလန္တာ၊ ဘာရီ၊ ဆီနာနှင့် ဂျူဗင်တပ်အသင်းများကို ကိုင်တွယ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ချဲလ်ဆီးအသင်းသည် သူ၏ပထမဆုံး ပြည်ပကလပ် အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ချဲလ်ဆီးကို ပထမဆုံးစတင်ကိုင်တွယ် သည့်နှစ်၌ပင်...
မော်ရင်ဟို၏ အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ အက်ဖ်အေ အရေးယူမည် မဟုတ်
မန်ယူအသင်းနည်းပြ မော်ရင်ဟိုသည် ဆောက်သမ်တန်ကို အနိုင်ရခဲ့သောပွဲတွင် ထုတ်ပယ်ခံ ခဲ့ရသော်လည်း ယင်းပြစ်ဒဏ်အတွက် အရေးယူခံရတော့မည် မဟုတ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ ပွဲတွင်မော်ရင်ဟိုသည်နည်းပြများ အတွက်သတ်မှတ်ထားသောစည်း ကိုကျော်လွန်၍ ၎င်း၏အသင်းကို ညွှန်ကြားခြင်းနှင့် အကူဒိုင်လူကြီး မိုက်ဂျုံးအား မတော်တဆဝင် တိုက်ခဲ့ခြင်းများကြောင့် ကွင်းလယ်...
ချိန်ဘာလိန်ထက် ကီရန်ဂစ်ဘ်ကိုဆုံးရှုံးခြင်းက ပိုအထိနာကြောင်း ၀င်းဂါးဝန်ခံ လာကာဇက်တီအား တို?
အာဆင်နယ်နည်းပြအာစင် ၀င်းဂါးက နွေရာသီတွင် အသင်းမှထွက်ခွာသွားသော ချိန်လာလိန်နှင့် ကီရန်ဂစ်ဘ်တို့တွင် ဂစ်ဘ် ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းက ပိုအထိနာကြောင်း ၀န်ခံပြောကြားခဲ့သည်။ ဂစ်ဘ်သည် အာဆင်နယ်အကယ်ဒမီ မှထွက်ပေါ်လာသူဖြစ်ပြီး အသက် ၁၈ နှစ် ကတည်းက အသင်းကြီးတွင်စတင်ကစားခွင့် ရခဲ့သူဖြစ်ကာပြိုင်ပွဲ အရပ်ရပ်တွင်...
အဲဗာတန်နည်းပြရော်နယ် ကိုးမန်းက ဘုန်းမောက်နှင့်ပွဲတွင် တိုက်စစ်မှူးရွန်းနီကို လူစားလဲခဲ့ ခြင်းမှာ ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့် မဟုတ်ဘဲ နည်းစနစ်ပိုင်းအရသာ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းခဲ့သည်။ ရွန်းနီသည် ပထမပိုင်းတွင် ပင်နယ်တီဧရိယာအတွင်း၌ ခေါင်း ယှဉ်တိုက်စဉ် ဘုန်းမောက်မှ ဖရန် စစ်၏တံတောင်ဖြင့် ထိခိုက်မိခဲ့ရာ...
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၄-ဒေ့ဗ် လက်ဒပ်ဗ်လက်ခံပါက ကမ္ဘာ့လက် ဝှေ့ချန်ပီယံရှစ် (WLC-4)တွင် တူး တူးနှင့်တွဲဆိုင်း စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အနိုင်ရရှိသူကိုသိန်း ၂၀၀ ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာလက်ခမောင်း ကုမ္ပဏီ၏ပွဲစီစဉ်သူဦးဇေသီဟက ပြောသည်။ မွေထိုင်းချန်ပီယံနှင့်မြန်မာ ပြည်အလွတ်တန်းချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ သူကနေဒါ...
Page 196 of 196 Prev 1 … 195 196
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော် ဂျပန်နိုင်ငံ Odawara မြို့ရှိ Narukawa အနုပညာပြတိုက်သို့ သွားရောက် ကြည်??
မဒါဂါစကာကျွန်း လူထုဆန္ဒပြပွဲအား ရဲများက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်း၊ တစ်ဦးသေဆုံး၊ ၁၆ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
၂ဝ၁၈ ဘောလုံးရာသီအတွက် ရခိုင်အသင်း ကစားသမားရှစ်ဦး ခေါ်ယူအားဖြည့်ထား